Finfinneetti torban kana keessa kirkirri lafaa rektar iskeelii shan tahutu uumame - BBC News Afaan Oromoo
Finfinneetti torban kana keessa kirkirri lafaa rektar iskeelii shan tahutu uumame
Kaleessa ganama jirattoonni magaalaa Finfinnee tokko tokko miidiyaa hawaasummaa irratti waanti akka kirkira lafaa fakkaatu nutti dhagahameeraa jechaa turan.
Dhugaamaan Finfinnee keessa kirkirri lafaa mudatee turee jechuun Yunivarsiitii Finfinneetti Daariktara dhaabbata saayinsii Jii'oofiiziksiifi Astiroonomii fi qorataa kirkira lafaa Dr Attaalaay Ayyalaa gaafannee turre.
Buufataalee shan odeeffannoo kirkira lafaa kennan kan naannoo Furiifi daangaa Keeniyaafi Itoophiyaatti argaman irraa ragaa argameen, Baha Itoophiyaa naannoo Mi'eessootti kirkirri lafaa mudatee ture.
Jiraattonni magaalaa Finfinnees surura ykn kirkira isa Mi'eessootu itti dhagahame jedhan Dr Attaalaay. Kaleessa sa'aa 12 irratti naannichatti kirkirri lafaa rektar iskeelii shan tahutu uumamee ture jedhan.
Finfinnee keessattis yoo tahe namoonii tokko tokko sururri ykn kirkirri isaa itti dhagahamuu mala jedhan. Kirikirri lafaa rektar iskeelii shan kan miidhaa qaqqabsiisu yoo tahuu baateyyuu keessumaa namoonni gamoorra jiraatan sururasaa dhagahuu ni danda'uu jedhaniiru.
Riqichi guddaan jige namoota 26 galaafate
Kirkirri lafaa lubbuu galaafate Taayiwaaniin raasaa jira
Kirkirri lafaa Meeksiikoo daa'imman hedduu mana barumsaatti ajjeese
Kirkirri lafaa mudate kun naannoo addatti Awaashiifi Cirootti dhagahamuu kan danda'uu yoo tahu Finfinneen immoo sulula qiinxamaadhaaf dhihoo gatii taateef mudannoowwan akkasii ni dhageessiii jedhan.
Kana durallee bara 2017tti kirkira lafaa naannoo Ankoobaritti mudate Finfinneetti dhagahameetu ture jedhan ogeessichi.
Mudannoon akkasii dhufuu akka danda'us ni eegamaa yoo jedhan, Finfinnees sulula qiinxamaatti siiqxee lafa jirtu gatii taateef carraan kirkira lafaa kana caalu dhagahuu dandeessu guddaa dha jedhan.
Lafa kirkirichi uumameetti manneen faa jijjigsuu ni danda'a garuu miidhaa hangas jedhamu hin qaqqabsiisu jedhaniiru.
Haa tahu malee waanta hanga ammaa uumameerraa kuni ni taha jedhamee sirriitti tilmaamamuun hin danda'amuu jedhaniiru.
Riqicha Xaaliyaan: Riqichi guddaan jigee namoonni 26 galaafate
Kirkira lafaa Taayiwaan: Rifaatiin gurguddaa kirkiraa boodaa uumameera
Obbo Haayilamaariyaam Dassaalanyi aangoo erga gadhiisanii harra waggaa lammaffaadha